German Chocolate Chocolate Recipe | A Couple for the Road
German Chocolate Cake Chikafu chikafu, chikafu, uye chinonaka chikafu chakanga chisina chiGerman. Iine midzi yawo pakati pemakore ekuma 19th muAmerica apo mubiki Samuel German akavaka chokoti yakasviba, kubika iyo yakazotumidzwa zita rake shure kwayo - Sweet Chocolat yaBaker's German.
Mapepa edivha haana kuonekwa kusvikira pakati pezana remakore re XNUM, apo "kamukira yezuva" rakabuda mupepanhau Dallas Morning News. Iyo chaiyo yakagadziriswa yakasikwa nemudzimai wemudzimai aigara kuDallas, George Clay, uyo akaomerera kune chidimbu cheGermany Sweet Chocolate kuti awane ruzivo. Izvi zvakapa chigumisiro chekupedzisira chigumisiro chakasiyana, upfumi hwakanga husingaenzaniswi, nekududzirwa kwekamukira kwakaputika.
Mazuva ano, iri doro rekuAmerica - zvokuti June 11th ChiGermany Chocolate Cake Day muUnited States.
Hongu, tinowanzoita mazororo ezvinhu.
Paunounganidza keke, kuzadzwa kunofanira kuve kunotonhora kana kutonhora (kana kutonhorera kwemazuva, panguva yakanyanyisa kwazvo). Kuti uve nenguva-inoshanda, tanga wazadza kuzadza, uye shandisa nguva yefriji yegadziriro yekubika, kubika, uye kunakidza zvingwa. MaPecans anochera anosimudzirwa muzadziro pamberi pegungano kusachengetedza kuti vasave vakanyorova uye vasina kugadzikana.
Servings: 12 vanhu
1 inogona kubuda mumukaka 12 ounces
1 mukombe granulated shuga 7 ounces
1 / 4 mukombe yakazara gorofu mushuga 1 3 / 4 ounces
6 tablespoons unalted batare 3 / 4 tsvimbo, zvigurwa muzvikamu 6
1 / 8 teaspoon tafura yemunyu
2 1 / 3 makapu kokonati yakasvibiswa yakatapira 7 ounces
1 1 / 2 makapu yakagurwa pecans 6 1 / 2 ounces, yakagadzirwa pamusoro pekubika bheji mu 350-degree oven kusvikira inonhuhwirira uye yakasvibiswa, inenge maminitsi 8
4 ounces choiswe semiseet kana bittersweet chocolate chopped rakanaka
1 / 4 mukombe Dutch-yakagadzirwa kakao sifted
1 / 2 mukombe mvura kubika
2 makapu husina kufanira hupfu hwechinangwa 10 ounces, pamwezve nekudururira mapundu emakeke
3 / 4 teaspoon soda yekubikisa
12 tablespoons unalted batare 1 1 / 2 matanda, akadzivirirwa
2 / 3 mukombe yakazara gorofu mushuga pamusoro pe4 3 / 4 ounces
3 / 4 teaspoon tafura yemunyu
4 mazai makuru kutonhora kwekamuri
3 / 4 mukombe kirimu yakasviba kutonhora kwekamuri
YOKUDZIDZA: Whisk yolks mu medium medium; zvishoma nezvishoma zvinoputika mumukaka wakabuda. Wedzera shuga, boroti, uye munyu uye kubika pamusoro pepakati-yakanyanya kupisa, whisking nguva dzose, kusvikira kusanganiswa kuvira, frothy, uye zvishoma kuoma, pamusoro pemaminitsi 6. Shandurai musanganiswa mumbiya, tsvina muvanilla, uye simbisai mukoti. Kuchena kusvika kungopisa, kufukidza neupurasitiki, uye refrigerate kusvikira yakonhorera kana kutonhora, zvishoma kana maawa 2 kana kusvika mazuva 3. (Pecans inokurudzirwa chete pamberi pekambani gungano.)
NOKUDZA: Rongedza rack yevheni kusvika panzvimbo yapakati-kati; kupisa huni kusvika kuC350 degrees. Sungai chokoti necocoa mudiki mukombe; dururira mvura inopisa pamusoro uye regai musimbe kusungunuka chokoleti, pamusoro pe2 maminitsi. Whisk kusvikira rakashata; ivai parutivi kusvikira yakanyirika kusvika kutonhorera.
Munguva iyi, shandisa miviri ye 9-inch-round ne 2-inch-yakananga-yakagadzirwa mapeji emakwenzi nemaoko asina kubika spray; mutsara nemapuranga kana waxed mapepa. Tsvina mapepa anotenderera, guruva pani neupfu, uye kugogodza kunze. Svina upfu uye kubika soda muvhareji yakasvibirira kana pane pepa rechifukidzo kana pepa.
Muhombodo yekumira mutevedzeri, kurova borosi, ushuga, uye munyu pa-medium-low speed kusvikira shuga yakanyoroveswa, pamusoro pe30 seconds. Wedzerai kusvika kusvika pakati-yakakwirira uye murove kusvikira musanganiswa uri chiedza uye futi, pamusoro pemaminitsi e4, kupera pasi ndiro ne rubber spatula nehafu. Uine musanganisi anoshanda pamasvikiro ekukurumidza, kuwedzera mazai kamwe chete panguva, achirova zvakanaka mushure mekuwedzera kwekuwedzera uye nekuchera pasi ndiro. Beat in vanilla; kuwedzera kukurumidza kusvika mukati-kati-yakakwirira uye kurova kusvikira chiedza uye chizere, pamusoro pe45 seconds. Uine musanganisi ari kumhanya ari pasi pfupi, wedzera chokoti, ezvo wobva wawedzera kukurumidza kusvika pakati uye urove kusvikira wakabatanidzwa, pamusoro pe30 seconds, kupera pasi ndiro imwe (batter inogona kuoneka yakaputsika). Uine musanganisi ari kumhanya pasi pfupi, wedzera zvakaoma zvinoshandiswa mu 3 kuwedzera, kushandura pamwe nekamuki (mune 2 kuwedzera), kutanga uye kupedzisa nemishonga yakaoma, nekurova mune imwe neimwe kuwedzera kusvika zvisingabatanidzwe. Mushure mokunge upfu hwekupedzisira uwedzere, irove pasi kusvikira uchingosanganiswa, zvino simbisai batter neruoko ne rubber spatula, muchikanda pasi nepamativi evharo, kuti muve nechokwadi chokuti batter inofanana (batter ichava yakareba). Gurai batter zvakafanana pakati pegadzirira cake pans; kuparadzira batter kumativi emapane ne rubber spatula uye nzvimbo dzakashata.
Bake makeke kusvikira mazino akaiswa mukati mekeke anouya akachena, ane maminitsi 30. Zvichengetedzeka mumapango 10 maminitsi, zvino gadzikisa zvingwa mujinga rekugadzira; chengeta uye kubvisa mapepa mapepa. Zvokudya zvitsva zvinokonzera kupisa kwekamuri vasati vazadza, pamusoro peawa 1. (Kooled keke dzinogona kuputirwa muupurasitiki uye kuchengetwa mukati mekupisa kwemazuva kusvika kuzuva re1.)
KUBATSIRA: Itai kuti pecans inoputika ive muchero. Ita ganda rimwe pakushumira ndiro kana kadhibhodi rakatema zvishoma zviduku pane keke, uye chechi yechipiri pabasa pamusoro (kana kusiya pavharaji). Nevha yakasungwa yakagadzirirwa kuitira kuti jira rienzane nebasa pamusoro pebasa, shandisa maitiro ekuona kuti ucheke gake rimwe nerimwe muzvikamu zviviri. Kutanga nekotanga yekutanga, kunyatsotarisa kubva kumusoro kwepamusoro uye kuisa parutivi. Kushandisa icing spatula, kuparadzira pamusoro pekombe 1 kuzadza zvakafanana nekeki, kupararira kuzadza kusvika kune zvakaperera kwekeki uye kuenzanisa pamusoro. Nyatsoisa nzvimbo yepamusoro bhokisi yepamusoro pamusoro pekuzadza; dzoka uchishandisa kusara kuzadza uye mapoka ekeke. Kana zvichidikanwa, guruva rinoputika pasi; kushumira kana kuti refrigerate keke, yakavharwa zvisina kufanira nemapuranga, kusvikira maawa 4 (kana yakafuratirwa kwenguva yakareba kupfuura maawa 2, regai bhokisi rimire pakushambidzwa kwekamuri 15 kusvika kumaminitsi 20 vasati vashumira).
Category: American, dhizeti, Food uye Drink, North America, Recipes, nyika dzakabatana Tags: American, dhizeti, German chocolate cake, recipe
Maitiro Ekushandisa 3 Mazuva muMacau →